Maxaa looga baahan yahay kulanku wuxuu kuxiranyahay dhexmaraynQoor iyo Swan-Neck? - Axadle
Maxaa looga baahan yahay kulanku wuxuu kuxiranyahay dhexmaraynQoor iyo Swan-Neck? – Axadle
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Amp James Swan, ayaa maanta oo Axad ah lagu soo dhoweeyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug.
Hogaamiyaha Galmudug Axmed Qoor-Qoor oo ay wehliyaan ku xigeenadiisa Cali Daahir Ciid iyo Swan ayaa xarunta Madaxtooyada ee magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay wadahadalo ku saabsan doorashada Soomaaliya ee 2020-21.
Warbixin kooban oo ka socota Howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya [UNSOM] ayaa sharaxay ujeedka socdaalka diblomaasiyadeed ee xarunta maamulka Galmudug.
“Saraakiil sarsare oo ka socota Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.” ayaa lagu yiri qoraal uu arkay Axadle.
“Wafdiga oo ay ka mid yihiin saraakiil ka socota UNDP iyo WFP waxay la kulmeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyagoo ka wada hadlay taageerada UN-ka ee Galmudug 2021, mid siyaasadeed iyo mid siyaasadeed. “ Bayaankaan waxaa siidaayay xafiiska UN-ka ee isku xirka arimaha bini aadanimada (OCHA) maalintii axada.
Swan iyada oo loo marayo xarumaha socdaalka ee dowlad goboleedyada ayaa qayb ka ah dadaallada beesha caalamka ee lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka looga hortago doorashooyinka ka hor Febraayo 8da maalmaha aan soo qaadanay.
Doorashada Soomaaliya waxaa caqabad ku ah is faham la’aanta jirta; in gobolka Gedo la geeyo ciidamada dowladda federaalka, guddiyada ay dowladdu ku dartay xubnaha lagu muransan yahay iyo xulista wakiillada Gobaladda Waqooyi.
Xiddigaha Arsenal iyo Real Madrid